Updated: 2016-03-29 16:50
ခုရော့ဂရူး( အမဲရောင်နွား) အသား ကင်
ကြည့် ရုံ နဲ့ တင် ပျော်လာ ပြီးေ တာ့ ၊ စား လိုက် ရင် ပိုပျော် လာ တဲ့ ခဂို ရှိ မား ရဲ့ ခုရော့ ခဲ ၀ဂရူး ( ခဂေါရှိ မ ခုရော့ဂရူး ) ။ ကင် နေ စဉ် အတွင်း မှာ တင် ထွက် လာ တဲ့ အသံ နဲ့ အန့ တို့ ကိုတောင် ပျော် ရ...
Updated: 2016-03-29 16:44
Ryobomochi (ဂျမ်ဘို မိုချိ )
Ryobomochi (ဂျမ်ဘို မိုချိ ) ဟာ ခဂို ရှိ မား မှာ နာ မည် ကြီး အစားအစာ။ ခဂို ရှိမား စကား နဲ့ ပြော ရင် ဓါးကြီး သေး ကို ဆို လို တယ်။စမ်းဂန်း အန်း ရဲ့ အတွင်း မှာ အနား ယူစရာလေး တွေ ဖြစ် တဲ့ ဒီ ဆိုင် လေး မှာ...
Updated: 2016-03-29 16:35
( အို တမရမ်း ဒွန်း ) ရဲ့ အသက် လို့ ပြော လို့ ရတဲ့ ရေ ပူ စမ်း ကြက် ဥ ပြုတ် ( အွန်း တမ ) ။ ဒီ (အွန်း တမ ) ဟာ အီဘုစု ခိ သဲ ပူစမ်း ရဲ့ ပူချိန် နဲ့ ပြုတ် ထား တာ ဖြစ်ပြီး အဲ့ ဒီ ကြက် ဥ ဟာ ရာမခ၀ မှာ ရှိ တဲ့...
Updated: 2016-03-17 16:54
တာခဲရှိ ခစွတ် လားမာန်
(တာခဲရှိ ခစွတ် လားမာန် ) ဟာ ကစွတ်အိုးဘူရှိ ရဲ့ အကောင်း ဆုံး ကုန် တစ် ခု အဖြစ် လာ တဲ့ အပေါ်ကနေဖြူးတဲ့ နေရာ မှာ အသုံး ပြု ထား တဲ့ လားမာန် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိဘုစုခိ ရာမခ၀ ရဲ့ ဟွန်းခါရဘူရှိ က...
Updated: 2016-03-17 16:41
ကတ်စတေလာ က ဂျပန် မှာ ပေါ် ပေါက် လာ ပုံ က လွန် ခဲ့ တဲ့ ၄၀၀ နှစ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကတ်စတေလာ ဟာ တန်းရှော ခောတ် ( နှစ်၄၀၀ အရင် ) ပေါ်တူ ဂူ လူ မျိုး တွေ ကနေ အီတိုးကိုရှင်းချိရော က ယူဆောင် လာပြီး အဲ့...
Updated: 2016-03-17 16:29
ဂုဇိုးဥူနိ ရှီမဘာရာ နာမည်ကြီး အစားအစာ
ရှေးကျပြီး သမိုင်း ရှိ တဲ့ ရှိမဘာရာ ဂုဇိုးနိ စာ ဆယ် မျိုး လောက် ရှိ တဲ့ ကုန် တို့ ကို ထည့်ချက် ပြီး အရသာ ထုတ် ထား တဲ့ စားသောက် ဖွယ် ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက် တို့ က နေယူထား တဲ့ စွပ်ပြုတ် ထဲကို တောင...
Updated: 2016-03-16 17:04
ဆက်ဆဲ ဘိုး ဘာ ဂါ
ဆိုဒ် က အမေရိ ကန် ၊ အရ သာ ကတော့ မူပိုင် ၊ ဆိုင် ၂၀ ၀န်း ကျင် လောက် မှာ ကိုယ်ပိုင် ဆက် ဆဲဘိူး ဘာဂါ ကို ၇ှာ ကြည့် ကြ ရအောင်၊ စစ် ကြီး အပြီး မှာ ကျန် ခဲ့ တဲ့ အမေရိ ကန် ရေတပ် သား တို့ က အထွေ ထွေ ယဉ်...
Updated: 2016-03-16 16:42
ပင် လယ် ပြင် က ၀န်း ရံ ထား တဲ့ ခဂို ရှိ မ ခရိုင် ဟာ ရေ ထွက် ကုန် တွေ အများ အပြား ထွက် တဲ့ နေရာ တစ် ခါ ပါ ။ ခိဘိနာဂေါ့ ၊ ကစွတ် အို ၊ တိုဘီဥအို လို့ ခေါ် တဲ့ တောင် ပိုင်း ပင် လယ် မှာ ရှိ တဲ့ လက်လက်ဆက်ဆက်...
Updated: 2016-03-16 16:32
ယူဖုအင်း P ရိုး ကိတ်
ရုံး ပိတ် ရက် အပတ် တိုင်း မှာ လူတန်း ကြီး တောင် ဖြစ် တဲ့ ရိုး ကိတ် အရောင်း ဆိုင် ( B speak )။ အဓိက ဖြစ် တဲ့ P ရိုး ကိတ် ဟာ ချို မြိန် မှု ကောင်းကောင်း နဲ့ အဆင့် အတန်းမြင့် အရသာ တစ် မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။...
Updated: 2016-03-16 16:25
Nagahama yatai (နာဂဟာမ လမ်းဘေးဆိုင်)
မြေအောက် ရထား အာကစက ဘူ တာ ကနေ မြောက် ဖက် ကို ၁၀ မိနစ်လောက် လမ်းလျောက် လိုက်ရင် နာဂ ဟာ မ ရဲ့ လူ ကူး မျဉ်း ကျား ကို မူတည် ပြီး လျောက် လိုက် ရင် ( ဖုခု အို က အလယ် ပိုင်း အရောင်း ဆိုင် ) တို့အနီး နား ကို...